"चामत्कारिक राजनेता प्रचण्डलार्इ साथ दिए देश समृद्ध बन्छ": एमाले नेता अधिकारी - Everest Dainik - News from Nepal
“चामत्कारिक राजनेता प्रचण्डलार्इ साथ दिए देश समृद्ध बन्छ”: एमाले नेता अधिकारी
भरतपुर, मंसीर १ । नेकपा एमालेका पाेलिट्व्यूराे सदस्य काशीराज अधिकारीले प्रचण्ड नेपालकाे चामत्कारिक राजनेता भएकाे बताएका छन् ।
शुक्रबार बिहान भरतपुरकाे गीतानगरमा अायाेजित सभामा अधिकारीले भने, “कमरेड प्रचण्ड सामान्य नेता हाेइन, असाधारण प्रतिभा भएकाे चामत्कारिक राजनेता हाे। उहाँले नेपालमा कसैले कल्पना नै नगरेकाे गणतन्त्रकाे स्थापना गर्नुभयाे। नेपालमा उहाँले के-के चमत्कार गर्नुभयाे, तपाईहरु सबैले बुझ्नुभएकै हाेला। नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर प्रचण्ड र अाेलीले फेरि अर्काे चमत्कार गर्दै हुनुहुन्छ।
याे पनि पढ्नुस तीन दलबीचको एकता सकारात्मक : मोहनविक्रम
जनअान्दाेलनकाे नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड चितवन जिल्लाले पाउनु इतिहासकै दुर्लभ अाैसर हाे। हामीले याे अाैसर कुनै हालतमा चुक्न दिनु हुँदैन।” “प्राय: धेरैले अरुकाे ईतिहास पढ्छन्, ईतिहासकाे व्याख्या गर्छन्। तर, प्रचण्ड त्यस्ताे व्यक्ति हाे, जसले अरुले लेखेकाे ईतिहास पढ्नुभएन”
अधिकारीले भने, “अाफै ईतिहास निर्माण गर्नुभयाे। जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया अाफैमा निकै ठूलाे ईतिहास हाे। हामीले ईतिहास निर्माता पाएका छौं। अब फेरि उहाँ समृद्धिकाे ईतिहास रच्ने संकल्प गर्नुभएकाे छ।” “कांग्रेसले नेपालका कम्युनिष्टहरुलाई लाेकतन्त्र सिकाई रहनु पर्दैन।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्ड र अाेलीबीच भेटवार्ता हुँदै
नेपालका कम्युनिष्टहरु कांग्रेसभन्दा धेरै लाेकतान्त्रिक छन्। नेपालमा प्रचण्ड नभएकाे भए नेपालमा गणतन्त्र अाउँथ्याे ? नेपालमा लाेकतन्त्र अाउँथ्याे ? प्रचण्ड नभएकाे भए नेपालमा लाेकतन्त्र अाउने थिएन। प्रचण्ड र अाेली नै नेपाली लाेकतन्त्रका खम्बा हुन्।”